နာရေးလမ်းကြောင်းလိုက်ပို့ရင်း ကားငါးစီးဆင့်တိုက်တဲ့အထဲပါပြီး အက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျော်သူ... - Sainpwar
နာရေးလမ်းကြောင်းလိုက်ပို့ရင်း ကားငါးစီးဆင့်တိုက်တဲ့အထဲပါပြီး အက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျော်သူ…
admin | January 13, 2021 | Uncategorized | No Comments
ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူကတော့ သူ့ဘဝရဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အချိန်အများစုမှာ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရင်း ကုန်လွန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်သူက အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိနေပြီဆိုပေမယ့် လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း လူငယ်တွေနဲ့အပြိုင် ပရဟိတအလုပ်တွေ စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကလည်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ကျော်သူက နာရေးကူညီမှုအသင်း ကားကို မောင်းရင်းနဲ့ ကားငါးစီးဆင့်တိုက်ပြီး အက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ကားငါးစီးဆင့်ကာ ဆင့်ကာတိုက်သော်ငြား… ဘာမှ မပူပါနဲ့။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရား နှလုံးသား မှာရှိတယ်။ ဘုန်းဘုန်းဘုရား လည်မှာဆွဲထားတယ်။
ယနေ့ နာရေးကူညီမှုလမ်းကြောင်းရေဝေးသုဿန်သို့အသွား လမ်းတစ်နေရာရှိဖြတ်လမ်းရှိသောနေရာတွင် ပင်မကားများရှင်းပါက
တစ်ဖက်လမ်းသို့ ကူးရန်အတွက် တန်းစီစောင့်နေသော ကားလေးတစ်စီးနှင့် လိုက်ထရပ်ကားအား နောက်မှ အဝေးပြေးခရီးသယ်တင်ကားတစ်စီးမှ တိုက်လိုက်၍ရှေ့ဆုံးတွင်ရပ်နေသော ကားမှာတစ်ဆင့်ချင်းတိုက်ခံရပြီး ကျွန်တော်မောင်းလာသည့် နာရေးနိဗ္ဗာန်ယာဉ်အား ရှေ့ဘေးမှ ဆောင့်တိုက် လိုက်၍ မိမိမှရှောင်လိုက် သော်လည်း မိမိ၏ ညာဖက်ရှိ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး၏ နောက်ပိုင်းဘေးဖက် ကိုမိမိမှတစ်ဆင့်တိုက်မိတော့သည်။
“မိမိမှ လမ်းမှန်၊ပုံမှန်မောင်းသော်ငြား တစ်ဖက်မှ အန္တရာယ်သည် မည်ကဲ့သို့လာ မည်ကို အထူးသတိထားရန် အသိတရားတစ်ခုရှိခဲ့ရသည်။ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပေါ် ပါလာသော ဘဝကူးသွားသည့်ရုပ်ခန္ဓာအား အသင်းမှ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် တစ်စီးအား အမြန်ခေါ်၍ ဘော်ဒီအားပြောင်းရွှေ့ကာ ရေဝေးသုဿန်သို့ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုလ်ပေးမှုအား တာဝန်မပျက်၊တာဝန်ကြေစွာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
အသင်းသို့ ပြန်အရောက် သုခဆေးခန်းမှတာဝန်ရှိသူများမှ အတင်းခေါ်ဆောင်၍ မိမိအား အာထရာဆောင်းစက်ဖြင့် မိမိ၏နှလုံးအားစစ်ဆေးပါတော့သည်။ သွေးပေါင်ချိန်ဖြင့်ချိန်ပါတော့သည်။
ဘာမှမဖြစ်။ ဘာမှမတွေ့။ မိမိတွင် ဗုဒ္ဓရှိနေသည်။ ဘုန်းဘုန်းရှိနေသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ မော်တော်ကား၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊လမ်းလျှောက်သည့် နေ့စဉ် လုပ်ရပ်များတွင် မိမိသည် ….
ဘယ်လောက်မှန်မှန်၊ ဘယ်လောက်ဖြေးဖြေး၊ ဘယ်လောက်သတိထားထား တစ်ဖက်မှ အန္တရာယ်သည်အချိန်မရွေး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်သည်ကိုတော့ သိထားသင့်တော့သည်။” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ကျော်သူကတော့ ကားငါးစီးကြီးတောင် ဆင့်တိုက်တဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ရပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်ပဲ ပွန်းရာပဲ့ရာလေးတောင်မရှိတာ သူပြုသမျှ ကုသိုလ်အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဆိုတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါဘူး။
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ဦးကျော်သူတစ်ယောက် အသက်ရှည်ကျန်းမာပြီး အများအကျိုးကို ဆက်လက်သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
“(၃) လအတွင်း ဆီးချိုရောဂါ လုံး၀ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးက အဖွားဒေါ်ဝင်း”….
ဧရာဝတီတံတားတည်ဆောက်စဉ်က နစ်နာခဲ့သည့်တောင်သူများကို လျော်ကြေး ကျပ် သိန်း ၃၀၀၀ ကျော်ပေး….
ထူးချွန်သော်လည်း မတတ်နိုင်ရှာတဲ့ ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်သမီးလေးအတွက် ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အလှုရှင်ပေါ်ပေါက်….
အချိန်မရလဲ (၂ )မိနစ်စာလောက် ခဏဝင်၍ ဖတ်ကြည့်ပေးစေချင်တယ်
ဘစိုင်းကိုထားခဲ့ပြီး ငြိမ်းမြတ်သူကို ဝန်းရံရမယ်လို့ တခါမှ မတွေးဖူးဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတာ ဖတ်သာကြည်လိုက်
မျက်ရည်ယိုဗုံး ထိခဲ့ရင် အမြန်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ….
သမထ အောင်ပြီး ဈာန်ရနေတဲ့ နောင်ချို က ဆရာတော် (အများသူငါ ဖူးမြော်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
ရွှေရူပါဦး နှင့် ယွန်းဝင့်လွှာအောင်တို့အား Miss အဖြစ်မှပြန်လည်ရုတ်သိမ်း….